Europe Dalalka Iyadoo Weather The Best | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Europe Dalalka Iyadoo Weather The Best
Waa adag tahay in la yidhaahdo waxa sida ugu fiican oo cimilo ugu xumaa, sidaa darteed marka aan bilaabay qoraal Wadamada Europe la Weather Khayr ma aanaan ogayn sida loo soo dhowaadaan. Ka dib oo dhan, in shakhsi oo dhan, ma aha waxa ay? Sidaas awgeed, waxaan go'aansaday inuu ku riday our sha on in 365 maalmood ee qorraxda, neecaw iftiinka iyo ma roob wanaagsan u samaysaa cimilada ku haboon, oo waxaa bilowdo.
Waxaan ka wada saaray liiska dalalka Yurub oo ku salaysan xaaladaha cimilada ay, waana in aad si ay u go'aamiyaan meesha aad rabto si ay u tagaan soo socda:
Our dalka 1aad ee dalalka Europe la Weather ee Best waa: Spain
cimilada A Mediterranean, kaabayaasha gaadiidka adag, fursado fiican in ay u safraan, iyo sidoo kale hawlaha kala duwan ee bulshada iyo wakhtiyada firaaqada ah, dhigi dalka Spain badan riyo. Waxay ku taallaa Koonfur Europe, Spain hubaal tiriyaa mid ka mid ah ugu safarada tareen muuqaal dabiici ah in Europe. Spain saadaasha hawada leh kulul, xagaa qalalan iyo khafiif ah, qaboobuhu roobaadka. Tan iyo Spain waa mid ka mid ah dalalka ugu weyn Yurub, waxa uu leeyahay in ka badan hal cimilada. Sidaas, waxaad filan kartaa cimilo badan oo saamayn qaaradeed ku leh badhtamaha baaxadda weyn: in ay diyaar u kulul, xagaa qalalan iyo qaboobuhu qabow. Translation: haddii aad tahay safrin dalka Spain iyo qorsheeyaan on joogi muddo dhowr bilood ah, soo qaado dharka qubeyska iyo jaakad.
Portugal – Midka 1aad ee Wadamada Yurub ee leh Cimilada ugu Fiican
Waayo, kuwa idinka mid ah oo halkii ay ku raaxaysan lahaa 22 ° C celcelis ahaan ku dhow sanadka oo dhan oo dhan intii dhididka soo baxay at 35 ° + darajo C, Portugal waa 1-dii on Wadamada Europe la Weather ee Best. Portugal waxa lagu tilmaamay sida cimilada CSB (ereygan waxaa loola jeedaa cimilada Mediterranean); a qoyan qoraxda diiran cimilada kaynta, iyadoo xagaa qalalan, iyo qaboobuhu qoyan. Haddii aad u safrayso tareen, doorato Portugal bilaha xagaaga. bisha ugu kulul ee Portugal waa July leh heerkulka celcelis ahaan 24 ° C, iyo mid ka mid ah qabow waa January 12 ° C. Waxaad ka qaadi doonaa saacadaha ugu badan qorax maalin August. Plus, aad had iyo jeer awoodo booqasho Western Europe tareen waayo aragti fiican, iyadoo aan loo eegin xaaladaha cimilada ee waddammada aad rabto in aad si aad u aragto.
dal kale Mediterranean in aad ka tagi doono jacayl la qayb this of Europe. Greece waa caadiga ah ee cimilada Mediterranean. Dalxiisayaasha iyo dadka deegaanka waxay jecel xagaaga ay diiran oo qalalan, khafiif ah iyo qaboobuhu roobaadka, iyo muddooyinka qorax kordhin inta badan sanadka. Greece waa kaliya mid ka mid ah kuwa dalalka Europe la Weather ee Best iyo in aad in ka badan hal mar u tag si buuxda u mahad quruxdiisa. Isagoo ka hadlayay of cimilada Mediterranean kaamil ah, inay cadaalad tahay inaan aad u xuso Italy oo kaliya, inkastoo Dabaylaha xagaaga ay keeni kartaa mid aad u kulul, xun qof kasta oo aan cimilada jecel yahay.
Britain – Kuwa ugu xun liiska wadamada Yurub ee leh Cimilada ugu Fiican
Inkastoo architecturally gabi ahaanba qurux badan, taariikh ahaan, iyo dhaqan ahaan, Britain ma aha mid ka mid ah dalalka Yurub oo la Weather ee Best. Well, haddii aad ku raaxaysan ceeryaamada joogto ah, roob, daruuro iyo cirro wax badan in aad ilowdo waxa midabo kale oo u eg. hawada qoyan oo ay la saadaalin Karin guud ahaan ma caawin midkood. Iyadoo Britain ma leedahay wax kadis ah qoraxdu halkan iyo halkaas, waxaan kula talin in aadan (weligaa!) baxo oo aan dalad oo dheeraad ah T-shirt. Fiiri kuwan 4 safarka tareenka daruuriga pre-safarka ee Europe ka hor inta aadan tegi on safarkaaga.
Lille in Tareenada London
Malaha mid ka mid ah dalalka ugu cajiibka Yurub, Iceland waxay ku faantaa fjordskeeda xiisaha leh, Bbc cagaaran sumurud dhammaadka lahayn, buuraha baraf cad, iyo waterfalls cajiib ah. Oh, ha ilaawin glaciers ay toosaa, ilaha biyaha oo kulul iyo geysers, iyo qaar ka mid ah friendliest ah, qof oo ku nool dunida oo dhan! Si kastaba ha ahaatee, nasiib daro, dalkaan Scandinavian waa caan ah ay hawada la saadaalin karin iyo wiswis. Iceland ayaa ku dhowaad 320 maalmood daruuraha qarada waaweyn cirro, 215 maalmood roob, snowstorms, oo soconkara. Dantiinna ma aha kuwa raadinaya in ay ku raaxeystaan ​​vacay qoraxdu.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad tahay qof ka mid ah fasaxa qaboobaha, Iceland noqon lahaa on sare ee liiska dalalka Europe la Weather ee Best.
Aad u ogaato dalalka Europe jecel la Weather ee Best kuu! oo wuxuu ku raaxaysan safarkaaga! Doorato kortaan tareen iyo buugga tigidhada tareenka la Save Tareenku.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-countries-best-weather%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / ZH-CN si / es ama / iyo luuqado badan.
#ingiriiska #qabow #giriig #kulul #kuleylka #baraf #Boqortooyada Ingiriiska #cimilada travelportugal travelspain
Tareenka Safarka ee Britain, Tareen safarka Shiinaha, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareen Travel Holland, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Switzerland, Tareen Travel The Netherlands, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe